Somalia:Dawladda Soomaaliya oo Ku Dhawaaqday Tirada Dadka Wax Kun Noqday Qaraxii Shaley & Maalmo Baroor Diiq ah – WARSAXAAFADEED | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Dawladda Soomaaliya oo Ku Dhawaaqday Tirada Dadka Wax Kun Noqday Qaraxii Shaley & Maalmo Baroor Diiq ah – WARSAXAAFADEED
Somalia:Dawladda Soomaaliya oo Ku Dhawaaqday Tirada Dadka Wax Kun Noqday Qaraxii Shaley & Maalmo Baroor Diiq ah – WARSAXAAFADEED
Wednesday, October 5, 2011 Laaska News
Laaska News Oct. 5,2011 Warka TFG da
Wasaaradda Arimaha Dibadda Oo Xaflad Sagootin Ah u Qabatay Arday U Baxeysa Imaaraadka
Madaxweyaha Jamhuuriyadda Oo Booqday Xaruntii La Qarxiyay iyo Isbitaallada Muqdisho
Dawladda Soomaaliya Oo Soo Saartay Tirakoobka Rasmiga Ah Ee Qasaaraha Masiibadii Shalay Ayadoo Maalmo Baroor Diiq Ahna Dalka La Geliyey….WARSAXAAFADEED
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalmo baroor diiq ah loo sameynayo dadkii shalay waxyeeladu kasoo gaartay masiibadii ka dhacday xaruntii Hargaha iyo Saamaha ayadoo dhanka kalena Dowladdu si rasmi ah u shaacisay Tirakoobka Qasaaraha Qaraxaasi.
Dowladda oo ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq ah, iyadoo dhimashaduna qaraxana ay korortay
(Muqdisho, 5 Oktoobar 2011) Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Shariif Sheekh Axmed, ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah oo loo sameynayo dadkii ku waxyeelloobay qaraxii shalay ee uu dhiigga badan ku daatay ee ay ku geeriyoodeen tobannaan qof, ayna ku dhaawacmeen tiro kale.
“Madaxweynaha wuxuu ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroordiiq ah oo loo sameynayo dadkii ku waxyeelloobay weerarkii argagixiso ee galaaftay nolosha dadka aan waxba galabsan oo u badnaa ardey,” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta, Mudane Cabdulqaadir Xuseen Maxamed (Jaahweyn).
Wasaaradda Caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in tirada dhimashada ay mareyso 72 qof, iyadoo dhaawacuna uu gaaray 103 qof, kuwaasoo 38 ka mid ah ay ku jiraan xaalad khatar ah. Warbixinnada isbitaallada ayaa sheegaya in inta badan dadkii loo keenay ay ahaayeen ardey iyo waalidiintood oo isku-diiwaangelinayay deeq-waxbarasho iyo rayid kale oo marayay jidka oo ah kan xilligan ugu mashquulka badan caasimadda.
Isagoo booqanaya goobta uu qaraxu ka dhacay iyo qaar ka mid ah isbitaallada, ayaa Madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in la dhisay guddi wasiirro ah oo isku-duwaya dadaallada wax loogu qabanayo dadkii wax ku noqday weerarkii argagixiso, iyadoo Xukuumaddu billowday in dibedda loo qaado bukaannada aan xaalkooda wax looga qaban karin gudaha dalka.
“Xilligan oo dalka uu la daalaa-dhacayo dhibaatada abaarta, ma jiro waqti ka xun oo argagixisadu ay weerari lahaayeen shacabka Soomaaliyeed,” ayuu Wasiirka Warfaafinta.
Waa weerarkii labaad ee ay kooxda Al-Shabaab ay si gaar ah ugu beegsatay ardeyda iyo aqoonta. Bishii Diseembar 2009 ayay ahayd markii uu naftii-hallige ka tirsan Al-Shabaab uu isku qarxiyay xaflad qalin-jebin ah oo loo sameynayay Jaamacadda Banaadir, halkaasoo uu ku dilay in ka badan 20 qof oo isugu jira wasiirro, ardey baraneysay caafimaadka iyo dhakhaatiir.
Somalia:Madaxweyaha Jamhuuriyadda Oo Booqday Xaruntii La Qarxiyay iyo Isbitaallada Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta booqday wakaaladdii hore ee Hargaha iyo Saamaha oo ah halkii shalay uu ka dhacay qarixii Musiibadda ahaa iyo qaar kamid ah Isbiltaallada magaalada Muqdisho oo ay ku jiran dhaawacyadii dadkii shalay ku waxyeelloobay qaraxa.
Booqashada uu maanta madaxweynaha Jamuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ku tagay xaruntii hore ee Haragaha iyo Saamaha ee magaalada Muqdisho oo ahayd halkii lahu xasuuqay arday Soomaaliyeed waxa uuna madaxweynahu soo kormeeray dhammaan meelihii uu qaraxa saameeyay.
Sidoo kale madaxweyanaha ayaa booqday Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku jiraan dadkii ay waxyeellada ka soo gaartay Musiibaddii indha beelka ahayd ee shalay magaalada Muqdisho ka dhacay waxa uuna madaxweynaha mid mid xaaladdooda u waraystay dhammaam dadkii uu ku booqday isbitaalka.
Isbitaalka Xallane ayuu sidoo kale madaxweynahu booqday islamarkaana ay ku jiraan dhaawacyo cul culus waxa uuna dadkii halkaasi ku jiray ka xog waraystay xaaladdooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin iyadoona uu madaxweyne Shariif ballan qaaday in ay dowladda ku dadaali doonto xaaladda caafimaad ee dadkii ku waxyeelloobay falkii foosha xumaa ee shalay Khawaarijta Shabaab ay ku xasuuqeen arday Soomaaliyeed oo ku haminayay in dalkooda iyo dadkooda ay wax u qabtaan.
Madaxweyne Sheekh Shariif oo saxaafadda haddal kooban siiyay ayaa sheegay in ay wax badan u qaban doonaan dadka dhaawacyada ah islamarkaana dalka dibaddiisa loo qaadi doono ciddii dhaawaceeda wax looga qaban waayo magaalada Muqdisho.
Munaasbad lagu sagootinayay arday Soomaaliyeed oo dalka Imaaraadka Carabta u aadaysay barashada Diplomaasiyada ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta Boostada iyo Isgaarsiinta ee magaalada Muqdisho.
Munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arimaha dibada isla markaana lagu sagootinayay arday gaareeysa ila 50 oo dalka Imaaraadka carabta u aadaysa barashada Diiplpmaasiyada ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uulyiin ka tirsan wasaaradaha warfaafinta iyo arimaha dibadda.
Munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaarada arimaha dibadda Cismaan Maxamed Aaden oo kula dardaarmay ardaydaasi oo jaamacado kaga soo baxay dalka iyo dibadda in ay yihiin danjirayaal Soomaaliyeed isagoo ku xusuusiyay culeyskauu xilkaasi leeyahay.
R/wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka wasaarada arimaha dibadda Maxmed Maxamuud Xaaji Aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay ardaydaasi in ay gutaan waajibaadka looga baahanyahay isagoo tibaaxay in ay ka howlgali doonaan wasaaradda arimaha dibada marka ay soo laabtaan, wuxuuna u mahad celiyay dawlada Imaaraadka oo iyadu koorso ku saabsan diplomaasiyada ugu deeqday ardaydaasi.
Tags: Muqdisho, SOMALIA, Warsaxaafadeed
Japan:Progress on nuclear plant seawalls Japan:Megumi’s parents call for abductees’ return home